Dubai no firenena mitombo haingana indrindra any Afovoany Atsinanana. Miankina amin'ny indostrian'ny solika ny toekareny, izay misy tahirin-tsolika sy tahiry betsaka ao Dubai. Mpifindra monina an'arivony no mipetraka any Dubai isan-taona avy any amin'ny firenena mifanolo-bodirindrina aminy sy any ivelany. Nifindra tany Dubai ireo mponina avy any India, Pakistan, Emirà Arabo Mitambatra, Filipina, ary firenena hafa mba hahazoana asa tsara kokoa. Dubai dia vilany mitsonika ny kolontsaina samihafa avy any Afovoany Atsinanana, Azia, UK ary Amerika. Ny rafitra ara-dalàna ao amin'ny Emirates dia rafitra roa miasa kokoa, miaraka amin'ny Shariah Islamika sy ny endriky ny lalàna tsotra no mibahan-toerana. Na izany aza, raha ampitahaina amin'i Arabia Saodita sy ireo firenena Arabo hafa, ny fitsipiky ny UAE dia malefaka kokoa. Ny fitsipiky ny Emirà Arabo Mitambatra dia apetraka sy havaozina hatrany mba hifanaraka amin'ny haingan'ny fitomboana.
Ny rafitra ara-dalàna ao Dubai, toy ny an'ny firenena ao amin'ny Golfa hafa, dia fitambaran'ny Sharia (Lalàna Islamika), Lalàna Sivily sy Heloka Bevava, izay tantanin'ny Fitsarana Federaly, izay ahitana ny fitsarana ambaratonga voalohany sy ny Fitsarana Tampony. Ny Filankevitra Ambonin'ny Mpitondra no fahefana ambony indrindra ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra. Izy no manendry ireo mpikambana dimy ao amin'ny Fitsarana Tampony Federaly, izay mitarika ny olana toy ny lalàna sy ny lalàm-panorenana. Mandray anjara sy mitana anjara toerana lehibe amin’ny lalàm-pifidianana isaky ny emirate ihany koa ny fitondram-panjakana eo an-toerana.
Ny rafitra ara-dalàna ao Dubai dia miorina amin'ny fitsipiky ny lalàna sivily ary voataonan'ny Lalàna Shariah Islamika sy ny Lalàna Ejiptiana. Tsy sahala amin'ireo firenena Afovoany Atsinanana hafa, i Dubai dia mitazona ny rafi-pitsarana azy manokana.
Ho an'ny mpisolovava, ny kandidà dia tsy maintsy manana fahazoan-dàlana amin'ny lalàna, lalàna Islamika, na mari-pahaizana mitovy amin'izany avy amin'ny oniversite neken'ny fanjakana na toeram-pampianarana ambony, ary nahavita ny fotoana fanofanana mety.
Nanomboka tamin'ny 2011, nisy politika vaovao nanery ny mpisolovava hisoratra anarana ao amin'ny Departemantan'ny Raharaha Ara-dalàna. Ilaina io dingana io alohan'ny hahazoan'izy ireo fahazoan-dàlana hanome tolotra ara-dalàna ivelan'ny efitrano fitsarana. Ny taratasy fisoratana anarana dia mamaritra ny fampahalalana tsy maintsy omen'ny mpangataka mba hahazoana ny fahazoan-dàlana.
Ny mpisolovava izay manao asa any Dubai dia tsy maintsy fahazoan-dàlana hampihatra ny lalàna any amin'ny tribonaly federaly ataon'ny Ministeran'ny Fitsarana sy any Emiri Diwan any amin'ny firenena hafa Emirate.
Ny mpisolovava ao Dubai dia tsy maintsy manana diplaoma amin'ny lalàna ekena na ny kolejy Shariah.
Any Dubai, ny mpisolovava dia sokajiana ho mpisolovava na mpanolotsaina ara-dalàna. Tsy afaka manao fampiharana any amin'ny fitsarana federaly ny mpisolovava raha tsy voasoratra ao amin'ny lisitry ny mpisolovava miasa ao amin'ny Minisiteran'ny Fitsarana, araka ny Lalàna Federaly momba ny Fitsipika momba ny Asa. Raha tsy izany, raha te hanao lalàna any amin'ny Emirates hafa ny mpisolovava, dia tsy maintsy mahazo alalana avy amin'ny Emiri Diwan izy.
Ny mpisolovava dia tsy maintsy olom-pirenena ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra mba hahafeno io fepetra io. Ankoatra izany, dia tokony ho 20 taona fara fahakeliny. Fanampin'izay, tsy maintsy heverina ho manana ny fahaiza-manao sivily feno izy, anisan'izany ny toetra tsara sy ny lazany, ary tsy tokony ho nahazo karazana sazy famaizana na heloka bevava mahakasika ny fanitsakitsahana ny voninahitra na ny fitokisana.
Na dia voafetra ho an'ny mponina ao an-toerana aza izany, ny mpisolovava dia tsy voatery ho teratany UAE. Ny mpisolovava vahiny dia tsy maintsy manana mari-pankasitrahana momba ny fianarana lalàna feno, voatomboky ny Minisiteran'ny Raharaham-bahiny. Ny mpanao lalàna vahiny dia tsy maintsy eo ambany fanaraha-mason'ny orinasa arabo arabo mba ho ekena.
Dubai dia firenena Arabo, izay manaraka tanteraka ny Lalàna Sharia. Tokony ho fantatry ny mpahay lalàna sy ny mpanolotsaina ara-dalàna any ivelany izany. Ny lalàna Sharia dia lalàna ara-moraly sy lalàna ara-pinoana ao amin'ny Islam. Miresaka lohahevitra tsy ara-pivavahana ireo lalàna ireo, anisan’izany ny heloka bevava, ny toe-karena ary ny politika. Tafiditra ao anatin’izany koa ny fanapahana momba ny raharaha manokana hafa – ny firaisana ara-nofo, ny sakafo, ny fahadiovana, ny vavaka, ary ny fifadian-kanina.
Ny mpisolovava ao Dubai dia miatrika ny olana ara-dalàna mahazatra ao amin'ny tany - raharaha heloka bevava, fitoriana momba ny trano, fitsarana ara-barotra, olana ara-dalàna momba ny asa, fanitsakitsahana ny sata manokana. Ny fitsarana momba ny sata manokana dia manaraka ny fitsipiky ny Shariah.
Ny serivisy hafa atolotry ny mpisolovava Dubai dia ny fitantanana orinasa, ny famolavolana ary ny fahazoan-dàlana amin'ny orinasa iraisam-pirenena, ny faritra malalaka, ny hetra, ny fitantanam-bola Islamika ary ny fampiharana ny lalàna.
Dubai dia namolavola rafitra ara-dalàna sy ara-dalàna mavitrika nandritra ny taona maro. Ny Emira Arabo Mitambatra dia manana karazana fitsarana roa araka ny voalaza etsy ambony izay ahitana fitsarana sivily sy fitsarana Sharia. Ireo fitsarana ireo dia miatrika olana maro isan-karazany momba ny lalàna. Samy manana ny fitsarana federaly ny Emirat tsirairay. Ny fifanekena amin'ny fanorenana sy ny fifandirana, ny angovo, ny fananana ara-barotra, ny fitantanam-bola ary ny famahana ny fifanolanana no sehatra fanao voalohany ho an'ny mpisolovava Dubai.
Ny mpisolovava Dubai dia afaka manao fampiharana amin'ny sehatra ara-dalàna isan-karazany. Azon'izy ireo atao ny miasa amin'ny maha-mpitsabo azy irery, amin'ny fiaraha-miasa, na amin'ny maha-mpikambana ao amin'ny orinasa sivily. Ny mpisolovava avy any Dubai dia mahay mitantana ny olana ara-dalàna momba ny taniny, ny mponina ao an-toerana ary ny vahiny.
Eritreritra 1 momba ny "Mpahay lalàna avy any Dubai no mahay mandray an-tanana ny olana ara-dalàna"
01/07/2015 amin'ny 9:28 maraina
mpanao faharoa ny endrika mifarana amin'ny tovana -ar amin'ny endrika tsy mahaleotena ny matoanteny pricar........................... toy ny fanamarinana sy taorian'io fanambaram-bola io. Fa amin'ny rafitra WPS dia mampiseho hatramin'ny novambra izy ireo fa nandoa izy ireo. ny orinasako dia namitaka ny rafitra WPS talohan'ny nidirako tao amin'ity orinasa ity tamin'ny fizarana karama 2 ho 1 ary mampiseho azy ho karama 2 volana.ka Avy eo dia mitohy amin'ny fomba mitovy ihany izany. Nefa manana ny porofon'ny fanamarinana azoko tamin'izy ireo aho satria noresahin'izy ireo mazava tsara rehefa nanome ny karama izy ireo, io porofo io ve dia ampy hanaporofoana fa miandry ny karama izy ireo.
Misaotra & arahaba